मनोरञ्जन – Page 963 – Etajakhabar
‘किस्मत २’को अर्को गीत सार्वजनिक (भिडियो)
ताजाखबर। छविराज प्रोडक्शनले निर्माण गरेको नेपाली चलचित्र ‘किस्मत २’को अर्को गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘उनी आकाशबाट झरेकी अप्सरा’ बोलको गीतमा शिल्पा पोख्रेल, किशोर खतिवडा र नव-कलाकार पृथ्विराज शर्मा देखिएका छन् । गीतमा उदितनारायण झाको स्वर, अर्जुन पोख्रेलको संगीत, अमृत रेग्मीको शब्द छ । ऋषि लामिछानेले निर्देशन गरेको यो चलचित्र असोज २१ गते फूलपातीको अवसर पारेर रिलिज हुनेछ । रामजी लामिछानेले यो भि...
फूलबारी रिसोर्टमा योलो समर पुल पार्टी हुने
पोखरा, ३२ साउन- इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लेभल नेक्स्ट प्रालिले भदौ ४ गते ‘योलो समर पुल पार्टी’ गर्दैछ । फूलबारी रिसोर्टको स्विमिङ पुल परिसरमा हुने पुल पार्टीको यो तेस्रो सिजन हो । लेभल नेक्स्टले हरेक वर्षको वर्षा ऋतुमा योलो समर पुल पार्टी गर्दै आएको छ । पुल पार्टीबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक सिर्जना भुर्तेलले सर्वाधिक फरक र चर्चित इभेन्ट भएको बताइ...
दीपिकालाई छोडेर किन चाइनिज युवतीसँग रोमान्स गर्दैछन् सलमान खान ?
एजेन्सी । सलमान खान युवती र नायिकाका विषयमा चुजी मानिन्छन् । हालै उनका बुबाले सलमानको बिहको बारेमा आँफुलाई मात्र नभई भगवानलाई पनि थाहा नदिएको बताइरहेका बेला सलमानले भने चिनिया नायिकासँग ट्विलाइटमा रोमान्स गरिरहेका छन् । सोही चलचित्रमा बलीउड नायिका दीपिकालाई निर्देशक कबिर खानले अफर गरे पनि दीपिकाले सलमानसँग फिल्म नखेल्ने भन्दै हलीउडमा नै रम्ने जर्मको गरिरहेकी छिन् । दीपिकाका अनुसार एउटै फिल्म...
आयो कपिल शर्माको शोलाई टक्कर दिने नेपाली कमेडी शो, पहिलो श्रृंखलामा केकी आधिकारी अतिथी (भिडियो)
ताजाखबर। नेपालमा पनि निकै रुचाईएको कमेडी शो हो 'द कपिल शर्मा शो' । भारतमा कपिललाई भेट्टाउने कुनै कमेडियन नरहेको चर्चा गरिन्छ । यसैबीच नेपालमा पनि लगभग उस्तै प्रकृतिको नयाँ शो आएको छ । पहिलो श्रृंखला YouTube बाट शुरु भएको यो शो को नाम हो, 'कमेडी होस्टेल' । यो कार्यक्रमलाई YouTube को लागि नै बनाईएको बताईएको छ । कार्यक्रममा सरापेको नामले परिचित यादव देवकोटा, सोल्टीको नामले परिचित राजु कमेडी, लोकेन...
फेसन ब्यवासायी श्रेष्ठ इन्डोनेशियाका राजाद्धारा सम्मानित
ताजाखबर। 'मिस वर्ल्ड नेपाल १९९७'की सेकेन्ड रनर अफ बिजेता चाँदनी श्रेष्ठ इन्डोनेशियाका राजाद्धारा सम्मानित भएकी छन् । फेसन र ब्यवासाय र समाज सेवामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई त्यहाँका राजाले 'डि राजा नोसनतारा एम्बेसडर अवार्ड'सम्मान प्रदान गरेका हुन् । सम्मान समारोहमा उनले सक्सेसफुल बिजेश लेडी अवार्ड समेत प्राप्त गरेकी छन् । सन् १९९९ मा फेमिना बुटिकबाट फेसन ब्यवसाय सुरु गरेकी श्रेष्ठल...
कटरीना र फवादको जोडी बाँधिदै
ताजाखबर। कटरीना कैफ र फवाद खानका फ्यानको लागि एक सुखद समाचार छ । ठुलोपर्दामा यि दुईको जोडी छिट्टै बाँधिदै छ । फिल्मको नाम फाईनल नभएतापनि करण जोहरले यो फिल्म बनाउनेछन् । खबर अनुसार पञ्जाबी ब्याकड्रपमा बन्ने यो फिल्ममा अलग तरहको प्रेमकथा हुनेछ । फिल्मलाई आदित्य धरले निर्देशन गर्नेछन् । कटरिनाको जोडी दोश्रो पटक पाकिस्तानी एक्टरको साथ बनेको हो । यसअघि कटरिनाले 'मेरे ब्रदर की दुल्हन'मा अली जफ...
बच्चा जन्माउन बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन : हट नायिका नगरिस फक्री
एजेन्सी । हट नायिकाको ट्याग पाएकी नगरिस फक्री अधिकांश समयमा खुल्ने र निर्धक्क बोल्ने नायिकाको सुचीमा पर्छिन् । हट फोटोसुटका कारण पनि बेलाबेलामा मिडियाको आँखामा पर्दै आएकी यि सुन्दरीले हालै दिएको अभिव्यक्तिले सामाजिक संजालमा सनसनी नै मच्चाएको छ । बलिउडमा करिअर अगाडि बढाइरहेकी यी हट सुन्दरीले एक अन्र्तवाताृका क्रममा अहिले तत्कालै बिहे गर्ने मोडमा नभएको र बच्चा जन्माउनका लागी बिहे नै गर्नुपर्छ भन्...
करिश्मा गोदावरी, भुवन केसी डिंगो । नेपाली कलाकारले कलाकारलाई के भनेर बोलाउँछन् ? भिडियो हेर्नुहोस्
ताजाखबर। नेपाली कलाकारले कलाकारलाई नै अनेक रमाईला नामबाट बोलाउने गरेका छन् । करिश्मालाई गोदावरी भन्ने देखी भुवनलाई डिंगो साथै दीपकराजलाई जोगी समेत भन्ने गरेका छन् । बरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाह देखि लिएर संगीतकार शम्भूजीत बासकोटा, भुवन केसी, किरण केसी, निर्माता छवि ओझा, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, रेखा थापा, प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, वील्सन विक्रम राई, धु...
नग्न सेल्फी सार्वजनिक गरेकी नायिकाले फेरी गरिन् यस्तो हर्कत, फोटो भयो भाइरल
एजेन्सी। नायिकाहरुले विभिन्न प्रपोगाण्डाका लागी पनि आफ्ना हट तस्विर र सिनहरु लिक गर्ने परिपाटी नै बन्न थालेको छ अचेल । सअघि बाथरुममा नुवाएको अश्लिल सेल्फी सार्वजनिक गरेर विबादमा तानीएकी नायिका राधिका आप्टे नग्नताका कारण पुनः एक पटक चर्चामा छिन् । बेलाबेलामा चर्चा र विबादमा तानीदै आएकी नायिका आप्टे यस पटक भने आफ्नो आगामी चलचित्र पर्चेडको नग्न तस्विर लिक भएपछि विवादमा तानिएकी हुन् । महिलाको ज...
आयो ट्युबलाइटको फर्स्टलुक
ताजाखबर। 'सुल्तान'बाट बक्स अफिसमा तमाम रेकर्ड तोडेका सलमान खानले आगामी फिल्म 'ट्यूबलाइट'को शूटिङ् सुरु गरेका छन् । यो फिल्मका निर्देशक हुन कबीर खान जसको साथमा सलमानले 'एक था टाइगर' र 'बजरंगी भाईजान' जस्ता सुपरहिट फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । 'ट्यूबलाइट'को शूटिंग लेह र लद्दाखको सुन्दरताबीच जारी छ । हालै फिल्मको फर्स्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ । फोटोमासलमान एक फौजीको कस्ट्यूम लगाएको देखिएका छन् ।...
Previous 1 … 962 963 964 … 1,022 Next
श्रीमान कतारमा नेपालमा रहेकी श्रीमती फ’रा’र, खोजिदिन बिदेशी भूमिबाट श्रीमानको आग्रह (भिडियो सहित)
-19687 second ago
दाङमा भव्य स्वागतपछि महराले भने : मेरो जीत नै जनताको जीत हो
-18910 second ago
देश आमा हुन्, आमालाई केक बनाएर का’टेर खान मिल्दैन : भीम रावल
-18327 second ago
अनलाइनबाटै यसरि हुँदैछ नेपालमा यौ’नधन्दा, बीस वर्ष मुनिका युवती बढी
-17892 second ago
गायक चिरन्जिवी भण्डारीले मेलिनालाई भने, ‘बिस्तारै बिस्तारै तिमि मेरी’
-16937 second ago
नायिका आँचलले उदिपसँग गरिन बिवाह !
-16215 second ago
नायिका आँचल र डा उदीपले साटे ओंठी, बेहुली बन्दा यस्तो देखिइन्
-9244 second ago
७० करोड कमिशन मागेको खुलेपछि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बास्कोटाले छाडे बालकोटस्थित प्रधानमन्त्रीको घर
-7648 second ago